Galbeedka Sitti oo maanta holcaysay iyo Guulo la gaadhay. – Xeernews24
Galbeedka Sitti oo maanta holcaysay iyo Guulo la gaadhay.
6. April 2021 /in WARAR/NEWS /von admin
Dagaalo fara looga gubtay ayaa saaka aroorti ila hadda ka socdda galbeedka gobolka Sitti dagaalkan waxaa soo qaadday siddi lagu bartay is maamulka kililka Canfarta dagaalku wuxuu si xawligga uga socdda goobihi ay soo weerari jireen ee duleedka iyo agagaarka magaalada Garba-ciise.
Wararka naga soo gaadhi oo laga soo xigtay ilo xog-ogaal ah waxay noo xaqiijeen in ay soomaalidu si geesinimo leh iakaga caabisay weeraraddi canfarta dibna loogu ceshay halkay ka soo duuleen.
Wararku waxay inta ku darayaan in Canfarta dib looga qabsaday qaybo ka mid ah dhulkii Soomaaliyeed ee ay bilihii iyo sannadhii la soo dhaafay deggaamaynta sidda baadilka ah uga wadan.
Goobaha dib looga qabsaday waxaa ka mid marka laga qiyaas qaado geeska magaalada magaalada Garba-ciise ka beegan dhanka magaalada Awash ee loo yaqaan magaalo-cad,gawracan iyo aagaga u dhoow ee dhamaan laga sifeeyey jabhaddihii canfarta.
Geeska kale ee magaalada garba-ciise kagga beegan magaalada Gawani waxaa iyaddana gacanta lagu dhigey ila 3 saldhi oo ay canfartu si sharci daro uga soo degtay oo kala ahaa;Goodiray,Geedka-qudhaca iyo Madax-riyaad oo dhamaan gacanta soomaalida lagu hayo.
Khasaara waxaa ila hadda la soo 2 odey oo reer Garba-ciise ah oo aan dagaalka qayb ka ahayn oo canfartu meel jid gooya ah u gashay iyo 2 dhaawac oo goobaha dagaalku ka socdo ku soo dhaawacmay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2021/04/dds.jpg 540 540 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2021-04-06 10:00:022021-04-06 10:00:02Galbeedka Sitti oo maanta holcaysay iyo Guulo la gaadhay.
Dagaalkii galbeedka Sitti oo Soomaali oo dhan wada taabtay. Dagaalka Soomaalida Iyo Canfarta Iyo Wararkii Igu Dambeeyay.